विदेशबाट आउने नेपालीहरुले यस्ता सर्तहरु पुरा गर्नुपर्ने ! – Namaste Dainik
August 26, 2020 August 26, 2020 NamastedainikLeaveaComment on विदेशबाट आउने नेपालीहरुले यस्ता सर्तहरु पुरा गर्नुपर्ने !
१० भदौ, काठमाडौं । १ सेप्टेम्बरबाट सरकारले नियमित र चार्टर्ड दुबै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तालिका तय गरेको छ । वायुसेवा कम्पनीले समेत उडान अनुमति पाएका छन् । तर, कोरोना भाइरसको महामारीका बीचमा हुन लागेको उडान भने शर्तैशर्तका बीचमा हुने छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बुझाएको उडान तालिका उल्लेख भएअनुसार नेपाल आउने नागरिक र नेपालसम्म ल्याउने वायुसेवा कम्पनीले करिब एक दर्जन शर्तको पालना गर्नुपर्छ ।
अब एउटै उडानबाट आएको सबै यात्रुको साथमा पीसीआर परीक्षणको नेगेटिभ नतिजा रिर्पोट भएमा सबै यात्रु होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी जान सक्नेछन् । घर गएपछि भने अनिवार्य १४ दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्नेछ । यस्ता यात्रुको अनुगमन स्थानीय तह र स्थानीय तह कोभिड १९ व्यवस्थापन केन्द्रले गर्नेछ । यात्रुले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी समेत सम्बन्धित स्थानीय तह र केन्द्रमा नियमित जानकारी गराउनु पर्ने गरी शर्त राखिएको छ ।
सरकारले पीसीआर परीक्षण सम्भव नहुने नेपाली रहेका स्थानमा चार्टर्ड उडान राखेको छ । तर, नियमित उडानमा भने अब पीसीआर नभएका, कोरोना पोजेटिभ देखिएका र सरकारले जारी गरेको शर्त पालना नगरी यात्रु ल्याएमा भने त्यसको सजाय वायुसेवा कम्पनीले पाउने भएका छन् ।
त्यसरी ल्याएमा एकातर्फ कानुन अनुसार कारवाही हुने र अर्कोतर्फ यात्रुको खर्चसमेत एयरलाइन्सले भर्नुर्ने गरी शर्त राखिएको छ ।
नेपाली बाहेक विदेशीको हकमा परिचयपत्र अनिवार्य
यस्ता व्यक्तिलाई बोर्डंग पास दिने क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर विभागले जारी गरेको परिचयपत्र र पासपोर्ट हेर्नु पर्नेछ ।
कन्सुलर विभागले जारी गरेको परिचय पत्र नभएमा आफु कार्यरत संस्थाले जारी गरेको परिचय पत्रलाई आधार मानेर वायुसेवा कम्पनीले जहाज चढाउन सक्ने भएका छन् ।
कुटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारी, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसंघका नियोगमा कार्यरत कर्मचारी र तीनका परिवारलाई दिने भिसाको सम्बन्धमा भने अध्यागमन विभागको निर्देशनअनुसार निर्णय हुने भएको छ ।
पहिलोपटक आउनेलाई नियुक्ति पत्रबाट छूट
कुनै पनि कुटनीकि वा पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न पहिलो पटक नेपाल आउने व्यक्तिको हकमा निजको नियुक्ति पत्र र पासपोर्टलाई आधार मानेर यात्राको अनुमित दिइने भएको छ । यस्ता व्यक्तिको पनि पीसीआर परीक्षणसहित अन्य प्रावधान भने नेपालीलाई सरह लागू हुनेछ ।
वायुसेवा कम्पनीले ती निर्देशनको समेत पालना गर्दै यात्रु नेपाल ल्याउन पाउने छन् । जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रबाट छनोट भएका होटेलको सूचि सार्वजनिक भइसकेको छ । क्वारेन्टिनमा बस्नै पर्ने यात्रुले अग्रीम होटेल बुकिङ गर्नुपर्नेछ । सरकारले रोक्ने निर्देशन दिएको समयमा जुनसुकै बेला पनि चार्टर्ड तथा नियमित उडान बन्द हुन सक्ने समेत मन्त्रालयले राखेको शर्तमा उल्लेख छ ।
काभ्रेमा पनि दुई जनामा कोरोना पोजिटिभ, दुवैजना बहिरि मुलुक बाट आएका ।